XOG XASAASI AH: Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo Diiday Qorshe uu xilka kaga qaadi rabay Farmaajo – Harodigeed
Saraakiil ku sugan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa Wakaalada Warqaad.com u sheegay in Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Thaabit Cabdi uu diiday in laga qaado xilkiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa wada qorshe uu isbedel ugu sameynayo shaqsiyaadka sida weyn ula shaqeeya, waxaana qaarkood laga qaadi doonaa xilalka ay hayaan, iyadoo loo wareejin doono xafiisyo kale.
Wakaalada Warqaad.com ayaa hore idin kugu so gudbisay in Gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi laga qaadayo xilka uu hayo, iyadoo loo wareejin doono Wasiiru Dowlada Madaxtooyada Soomaaliya, balse Thaabid ayaa biyo diiday qorshahaan wuxuuna ku adkeystay inuu hayo xilkiisa.
Fahad Yaasiin oo ah Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya iyo Thaabit ayaa loo arkaa labada shaqsi ee ugu dhow Farmaajo, waxaana labadooda uu doonayaa inuu isugu keeno Madaxtooyada.
Inta uusan bilaaban sanadka 2018 ayaa la filayaa inay isbedelo ku dhacaan wasiirada xukuumada Kheyre iyo masuuliyiin xilal kale haya.
Talaabadan uu Thaabit ku diiday qorshaha Farmaajo ayaa abuuri karta xiisad siyaasadeed oo ka dhex abuuranta Madaxtooyada, waxaana go’aanka ugu dambeeya laga sugayaa Madaxweyne Farmaajo hadii uu aqbali doono diidmada Thaabit iyo hadii qaadan doono go’aan kale.